Allgedo.com » C/llaahi Axmed Cadow “Dowladdu waa in ay wada hadal la furataa Alshabaab waayo..”.
C/llaahi Axmed Cadow “Dowladdu waa in ay wada hadal la furataa Alshabaab waayo..”.
Print here| By: allgedo.com: Wednesday, October 12, 2011 // 1 Jawaab
Siyaasiga C/llaahi Axmed Cadow isla markaana horay u soo noqday Safiirka Soomaaliya ee dalka maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in madaxda dowladda KMG soomaaliya laga doonayo wada hadal in ay la furtaan Xarakada Alshabaab.
Safiirkii hore Soomaaliya ee dalka Maraykanka C/llaahi Axmed Cadow waxa uu ka dhawaajiyey in xiligan ay tahay waqtigii madaxda dowladda KMG soomaaliya laga doonayay in ay wada hadal la gasho Xarakada Alshabaab si nabad loogu soo celiyo Soomaaliya.
“Dowladdu waa in ay wada hadal la furataa Alshabaab waayo awoodii Alshabaab ee Muqdisho waa sii baaba’aysaa, marka waa lagama maar maan in wada hadal lala galo mas’uuliyiinta alshabaab.” Ayuu yiri C/llaahi Axmed Caddow oo ku sugan dalka Maraykanka.
Xarakada Alshabaab ee dagaalada kula jira dowladda KMG Soomaaliya iyo Ciidamada shisheeye ee AMISOM waxay horay u shaacisay in aysan wada hadal la galayn dowladda KMG Soomaaliya ilaa bay tiri guud ahaan dalka oo dhan ka saarto Ciidamada shisheeye, dalkana lag dhaqan galiyo ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Ugu danbeyntii lama oga in madaxda dowladda KMG Soomaaliya baaqani loo jeediyey ee ah in ay wada hadal la furato Xarakada Alshabaab fulin doonto iyo in kale.
Daahir Guuleed, Muqdisho/Somalia.
1 Jawaab " C/llaahi Axmed Cadow “Dowladdu waa in ay wada hadal la furataa Alshabaab waayo..”. "
warsan gabar cadudwaq gobolka xorta says:
ninkaanu ma riyoonayaa ?madaxda shayaadiinta marka wada hadal lala galayo ma wuxuu moodey soomali mase waxaa wada hadal lagula galayaa soomaliya ajaaniibta dalalkoodii inta danbiga kasoo galay soo cararey